Isiphenduke isibaya inkundla yezemidlalo eMaqongqo | News24
Isiphenduke isibaya inkundla yezemidlalo eMaqongqo
IzITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Inkundla yaseMaqonqo engaphelileukwakhiwa nesiphenduke isibaya sezinkomo.
KUNEMIBUZO ngesithabathaba senkundla yezemidlalo esiphenduke isibaya sezinkomo eMaqongqo onguwadi 1 ngaphansi kaMaspala uMkhambathi.
Le nkundla enkulukazi yakhiwe eduzane nesikole samabanga aphansi iVilla Maria.Ngokuthola kwephephandaba i-Echo le nkundla isimbiwe izikhathi ezintathu ngoba kuthiwa iyaqhutshwa ukwakhiwa. Ngenkathi i-Echo ivakashele le nkundla ithole ukuthi inamagumbi okushintsha nendawo yokudlalela ithenisi nayo engaphelile. Amagumbi okushintshela wona anamafasitela afile kanye neminyango elimele.
Uma ungena nje emnyango wawo onke lamagumbi uhlangabezwa ubulongwe bezinkomo obugcwele phansi. Ngaphandle, sonke isithabathaba lesi sigcwele utshani kanye namatshe nezinkunzimalanga zemigodi embiwe.
I-Echo ikhulume nelinye ilungu lomphakathi elichaze kabanzi ngelakubona kusukela le nkundla iqala yakhiwa.
Ilungu leli lithe le nkundla ithi ayibe neminyaka eyishumi (10) yaqala ukwakhiwa. Lichaza leli lungu lithe sekune zihlandla ezintathu lapho kufika khona ugandaganda ususe utshani umbe yona inkundla lena.
“Ngikhuluma nawe nje selike lasebenza khona linjalo lingaqediwe. Besiye sithi uma sibona ugandaganda uqala ugugula sibe nethemba lokuthi seyizoqhutshwa inkundla.
“Lokho sekwenzeke amahlandla amathathu, lifike ligugulwe kodwa lutho ukuqhutshwa noma kube nomehluko kuyona inkundla. Umphakathi wakule ndawo awunayo inkundla esesimeni esihle lapho ungenza khona imidlalo.
“Saba nethemba ngesikhathi le nkundla yakhiwa sazitshela ukuthi sekuzoba nendawo lapho sizokwenza khona izinto zomphakathi futhi siphinde sibe nemidlalo khona.
“Konke lokho akwenzeki njengoba liye limbiwe liphinde liyekwe kumile utshani kulona,’ kuchaza leli lungu lomphakathi.
Okhulumela umasipala waseMkhambathini uMnu Fana Lembethe uthe ukwakhiwa kwale nkundla kuqale ngenyanga kaMandulo (September) ngonyaka ka-2013.
Uthe ukhulumile nekhansela likawadi 1 uMnu Roger Zondo okubeke ngokusobala ukuthi ukwakhiwa kwenkundla kuqale ngonyaka ka-2013 hhayi ngo-2006 noma ngo 2009 njengoba kusho abanye.
Uthe inkundla ima ukwakhiwa nje ingoba usonkontileka wavele washiya phansi.
“Akazange abeke zizathu kumasipala mayelana nokushiya kwakhe ukwakhiwa kwenkundla. Ngenxa yalokho umasipala usezinhlelweni zokuphinda uqoke inkontileka okuyiyona ezokwenza lo msebenzi,” kuchaza uZondo
NGIKHULUMA NAWE NJE SELIKE LASEBENZA KHONA LINJALO LINGAQEDIWE. BESIYE SITHI UMA SIBONA UGANDAGANDA UQALAUGUGULA SIBE NETHEMBA LOKUTHI SEYIZOQHUTSHWA INKUNDLA